Fowuni. Iimpawu zentwasahlobo-yehlobo ehlobo
Oku kuza phakathi kwebusika. Ixesha lokucinga malunga nesigqoko sakho se-spring-summer. Kakade kuzo zonke iimveliso ezintsha zexesha elizayo. Yintoni ongakhetha yona? Ziziphi iintlobo zamabhinqa ezikhoyo namhlanje-ehlobo zase-2010?
Nangona i-2009 yinto edlulileyo, kodwa ezinye iifashthi ziza kuqhubeka. Izambatho zabafazi ziya kugcina ukukhanya kwayo. Imibala ekhethiweyo ibhakabhaka, i-blue, lilac, i-emerald, ibomvu, i-orange. Uyakwamukela ukugqoka iinqununu ezinqamlekileyo, ezizaliswe ngokufaka izinto ezifakwe ngaphakathi. Kwiifestile zefashoni, izikhwepha, iipketi. Izixhobo ezinokuthi zifikelele kwi-hand-bags zizenzele izikhwama ezincinane, izikhwama eziqhelekileyo kunye namasongo. Kodwa umfanekiso oqinileyo wesithandwa ngumfazi awunakwenzeka ngaphandle kokugqoka. Ingubo iya kuba yindawo efanelekileyo kuyo yonke indawo-emsebenzini, kwintlalontle nakwiindawo eziselunxwemeni.
Kwaye ngoku malunga nayo yonke into ngokubanzi . Umbala . Njengangaphambili, yonke into icacile. Ukuya emsebenzini - khetha iifowuni zeetoni eziphantsi. Ukuba ukhetha iingubo zangokuhlwa, ke umise imibala yemvelo. Kodwa ukugqoka i-beach, yonke imibala yobuncwane ifanelekile.
Inkathazo yehlabathi jikelele ayizange ikhuphe ngisho nefashini yabasetyhini. Iintlobo zentwasahlobo-ehlobo zase-2010 ziquka ukuthengwa kwezinto eziqhelekileyo, iimpahla zokuqala, izihlangu kunye nezixhobo. Izinto ezidangalileyo zabakhi befestile, ezingafaniyo kwixesha elide, zilahlekelwa ukuthandwa. Iiklasiki zinyusa ukugqithisa kuzo zonke iindawo.
Le nto yimizuzu enye yonyaka - ingubo . Izambatho zingabani na. Awukwazi ukwenza ngaphandle kwendwangu elithambileyo, e-airy, ehambayo. I-batiste enhle kakhulu, isilikhi yengokwemvelo, elula, kodwa ukususela kule ingqungquthela encinane. Ezi zambatho zikhusela umzimba, zithuthuzela, zigxininise ubufazi. Kwaye kwangexesha elifanayo banako ukufihla amaphutha. Intshukumo yexesha eli lixesha la ma-three-dimensional shoulderers. Musa ukulibala malunga neenkcukacha ezimangalisayo. Ingaba yintsimbi, i-sequin, kunye nokuzibopha ngokukhululeka. Indlela yohlobo lwe-spring-summer summer is cell, kuyo yonke imbonakalo yayo, emnyama nomhlophe kunye nombala. Ientambo zamabhinqa kunye neendonga ezinokubakho namhlanje zihlonishwa kakhulu. Kodwa imibala yokugqoka i-classic, ivalwe. Zonke i-shades ze-beige ne-peach zamukelwa. Ziyakwazi ukudibaniswa nomhlophe nomnyama.
Ziziphi iintlobo zokugqoka ezikhoyo ngoku? Into ethandwa kakhulu yinto encinane yokugqoka i-metallic hue. Vula umzimba obuninzi - umgca obunzulu okanye umgca wegxala elilinganayo - ukhetho lwexesha. Kwaye ukudala abaqulunqi be-neckline abathandekayo basebenzisa i-satin ene-crinkled. Kwiingubo zokuhlwa, i-maxi ukusuka kwi-lace eyona nto ifanelekileyo. Kwaye imimandla yenkqutyana ejikelezayo yenza ukuba ube yinkosikazi yebhola. Ii-corsets eziqhelekileyo kunye nesilivere zikhanya ngokudibanisa neengubo ezivulekileyo, ubude kumgangatho buya kulawula. Ufuna ukunqoba abanye, ukudala umfanekiso oyingqayizivele wothando - khetha iingubo phambi kovaliwe ngokupheleleyo, kodwa unqamle umva. Kwaye konke oku kuhlanganiswe ngendwangu elithambileyo, ehambayo. Gxininisa zonke iindlovu zomzimba wesetyhini ngefayile yejometri yokubetha okumnyama kunye nokusila.
Umendo omtsha kwindlela yohlobo lwamaxesha ehlobo lwehlobo lehlobo lasehlobo laseMelika. Imimiselo yeMpuma ingalandelwa kokubili ekutyeni, kunye nokukhethwa kweendwangu, kunye nombala.
Abaqulunqi abaninzi kwiiqoqo zabo kulo nyaka baye bakhetha zonke iintlobo ze-blue. Yibhakabhaka eluhlaza okwesibhakabhaka, kunye ne-cornflower eluhlaza okwesibhakabhaka, kunye nebala kunye nobumnyama. Umendo weetoni ezingathathi hlangothi awuzange ulahlekelwe ukubaluleka kwawo. Kodwa bafumana i-chic ekhethekileyo ngenxa yezinto zokubhabisa ezongezelelweyo - izikristali, ezisetyenziselwayo, ukubetheka. Ukufudumala kwemibala emdaka kubutyebi. Lo ocher okhanyayo, kunye nechocolatele emnyama.
Imfashini yabasetyhini ayidluliyo kunye neengubo zangasese zasekhaya. Umkhwa wabo kubo i-retro. Ukususela kwikhola ukuya kwixesha elide, i-skirt. Uqoqo lwe-Spring-Summer 2010 lubandakanyekile kwaye lugqoke ngaphandle kweembambo. Baye bagxininisa ngokucacileyo lo mfanekiso, ujikeleze ngokukhawuleza zonke iindlovu. Ubungakanani belo gqobo lusezantsi ngaphantsi kweedolo.
Skirts. Akukho mda kumngcamango. Kulo nyaka, zombini iifreyiti-iibhaluni kunye neengubo zeklasi-ipensele zifanelekileyo. Ubude bokuba akukho mntu usethayo. Khetha nantoni na, ubuncinci, ubuncinane ubuncinane. Kodwa, nangona kunjalo, isikhungo sokuqwalasela ubude emadolweni.
Iingqungquthela. Ngefestile kukho imibala emincinci. Intsingiselo yindlela yokusebenzisa iipokotshi ezingaphezulu.
Amabala kunye namakhati . Yiyo le nkcazo ye-wardrobe iye yafumana utshintsho olubi. Ulibala malunga neentonga. Ukukhethwa kwenkathi yintwasahlobo-ihlobo - i-blame ye-satin kunye nekhati yembala enobunzima. Imfashini yabasetyhini inikezela ngemikhono emfutshane okanye imikhono emakota amathathu kunye neentlambo ezincinci.
Le ndlela ifowuni. Iintlobo ze-spring-ehlobo zase-2010 zenza abafazi banomtsalane ngakumbi, beqaqambile, banomtsalane.
Tattoo kumzimba wesetyhini
I-Fashion ye-2010, iqoqo labasetyhini
Yeyiphi imfashini yokugqoka ukuwa: i-3 e-bright7 trends-2017-2018 kwi-wardrobe yansuku zonke
Pide kunye noshizi
Isobho senkukhu kunye nekholifulawa
Ukubonakala kwendoda yoshishino
Omnye owayengumfazi waseRurban Omarov watsho ngokuqhawula umtshato wakhe ku-Xenia Borodina
Iinkonzo kunye neNgcaliso yomtshato womtshato
Iimfihlelo zokunakekelwa kwesikhumba
Ukuzivocavoca ukuqinisa izihlunu zesisu